E. Obama: ku dhasha cadaabta canug aad u kharriban. - KU SAMEEYSAA NABADA
E. Obama: ku dhasha cadaabta canug aad u kharriban.
CADDAALADDAUNESDIB U EEGID
By EMMA ELISE KAMGANG On Juun 23, 2020
Cayrinta Ernest Obama ee loo igmaday jagada sare ee maamulaha guud ee telefishanka sida gaarka loo leeyahay, Vision 4, ayaa sii kicinaysa sumcadda adduunka.
Xasuuqii Tutsi: cadaalada Faransiiska waxay xireysaa feylkii…
Maxkamadaynta Laurent Gbagbo: Fatou Bensouda, ayaa ah ...
ICC: waa murashaxiinta afrikaanka u ah isbadalka Fatou…
Ma jiraan wax ka turjumay qurxintaan aan caadiga ahayn ee 18-kii Juun ee lagu qabtay xarunta kooxda 'Anecdote'. Xusuus-qorka guutada dhuleed ee Efoulan ayaa kadhigtay dhisida iskaashatada halkaas oo Ernest Obama uu ku qaboobay xafiiskiisa loona wareejiyay SED eedeymo ku filan oo xad-dhaaf ah: Jabinta kalsoonida, khiyaanada sarre, khiyaanaynta iyo adeegsiga been ah, ku-takri-falid. Isniintaan, Juun 22, waxaa loo bandhigi doonaa qareenka guud.
Si taas loo gaaro, maamulaha shirkadda Amougou Belinga ayaa ku amartay shirkadda sharciga Faransiiska Wilson isaga oo ka wakiil ah shirkadda Telesud Groupe Vision 4 inay u safraan dalka Cameroon. Guddoomiyihii hore Charles Tchoungang wuxuu sidoo kale qeyb ka yahay kuliyada qareenada ee uu ugu yeeray iskaashatada Anecdote kiiskan. Isku day cabsi ah oo ka soo kabashada siyaasadeed, Maurice Kamto waxay ka shaqeysay inay difaacdo eedaysanaha, in kasta oo xaaladdiisa qareennimo hore ay uga tagtay shaqaalihiisii ​​xabsiga.
Waxaa laga soo kiraystay telefishanka Ariane, Ernest Obama wuxuu la kulmi doonaa koror meteoric ah oo ka dhex jira kooxda Anecdote. Kartiisa shaashadda ayuu ku wareejinayaa shaashadda ilaalintiisa ee lataliyeheeda Jean Pierre Amougou Belinga, kaliya ma siinayo isaga xaalad caafimaad oo raaxo leh, laakiin wuxuu daboolayaa isla markaana curyaaminayaa daweynta yar yar ilaa heer ka dhigeysa in shaqaalaheeda kale ay ka masayraan. Ernest Obama wuxuu ka socdaa dhammaan safarradi Madaxa fulinta. Wuxuu ku safraa diyaarad qaas ah wuxuuna ku xiraa shabakadiisa shabakada xiriirka Amougou Belinga, ilaa iyo inta laga helayo buuga cinwaankiisa.
Laga soo bilaabo Christophe De Chavanne ilaa Bruno Masure, laga soo bilaabo Michel Denisot ilaa Patrick Drucker oo loo maro Patrick Poivre Davor, dhamaan xiddigaha telefishanadan waxay qireen inay daryeelayaan caanka iyo madaxa weyn ee shaashadda yar ay bixiso. Ka sakow tuhunnada musuqmaasuqa dhaqaale, Ernest Obama waa dhibbanaha kafaaraggudka ee telefishanka. Ilmo sabool ah oo ka tegey waddankiisii ​​Ebogo ee Mefou iyo Afamba, wuxuu ku noolaa degmada Mvog-Ada halkaas oo uu ku noolaa lacag-bixiyeyaasha. Amougou Belinga ayaa adduunka u muujiyey. Hoogay, nimanku waxeey hilmaamaan waxkasta oo aan ahayn inaydaan ahayn kuwa mahadsan.
Isagoo si xun uga qaatay xil ka qaadistiisa maamulka guud ee Vision 4, Ernest Obama wuxuu badin doonaa ficillada kicinta iyo geesinimada leh. Waxaan aragnaa isaga oo nool, gaar ahaan showga 'Tour d'écizon', halkaas oo uu si adag uga jawaabayo doodaha Parfait Ayissi oo ah badalkiisa. Wuxuu ku dhawaaqay shabakadaha bulshada, daabacaadda buug ku saabsan shaqooyinka samafalka ee Paul Biya, horudhac uu sameeyay Faustin Archange Touadera iyo ereyga dambe ee Samuel Mvondo Ayolo. Baadhitaan ayaa la sameeyay, labada shakhsiyaad iskuma aqoonsana mashruucan tifaftirka.
Waxaa sidoo kale laga filayay inuu noqdo agaasimaha ololaha ee ninka ka soo horjeedda Faustin Archange Touadera ee doorashada madaxtinimada ee soo socota ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, isagoo ka duulaya waajibaadkiisa kaydka, wuxuu si qarsoodi ah uga siidaayay kooxda Anecdote. Khaladaad fara badan oo cudur daar u leh dejinta caddaaladda mooshinka ayaa laga takhalusaa wada-shaqeeye oo khatar ugu noqday boqortooyo lagu dhisay xoogga shaqada iyo wax badan oo allabari. Waxaa xusid mudan, Amougou Belinga, oo wareystay Ernest Obama barnaamijka “Décryptage”, wuxuu qirtay: “Waxaan door bidaa iskaashi daacad ah laakiin aan karti u laheyn iskaashi karti leh laakiin daacad u ah”. Jumladdan, waxaa jira dhammaan dhiirrigelinno dagaallada u dhexeeya aabbaha iyo wiilka.
isha: https: //actucameroun.com/2020/06/23/cameroun-groupe-lanecdote-decheance-dun-enfant-gate/? utm_source = ogeysiis & utm_medium = riix & utm_campaign = fcm
dawladda si ay u tijaabiso shay isku xidhan oo u heellan raadinta xiriir bishii Luulyo
Masar: $ 300 milyan oo doolar oo ka timid EBRD si loo taageero meheradaha dhibaataysan
Xasuuqii Tutsi: Cadaalada Faransiiska waxay xireysaa feylkii weerarkii…
Maxkamadaynta Laurent Gbagbo: Fatou Bensouda, waa xeer ilaaliyaha guud ee ICC
ICC: waa kuwee murashaxiinta u dhashay Afrika ee ku guuleysanaya Fatou Bensouda?